हरेकको शरीर आफैमा सुन्दर छ » देशपाटी
तपाईं मोटो हुनुहोस् वा दुब्लो, अग्लो हुनुहोस् वा होचो, गोरो हुनुहोस् वा कालो । यी सबै प्राकृतिक रुप हुन् । र, प्रकृतिका हरेक रचना आफैमा सुन्दर हुन्छन् । तपाईं पनि सुन्दर हुनुहुन्छ, जब अरुसँग आफुलाई तुलना गर्नुहुन्न । तपाईं जस्तो हुनुहुन्छ, आफुलाई त्यही रुपमा स्विकार्नुपर्नेछ ।
मान्छेले आफ्नो शरीरलाई लिएर न दम्भ पाल्न उचित छ, न ग्लानी नै महसुष गर्नुपर्नेछ । तपाईं तटस्थ भएर हेर्नुहोस्, सबै ठीकठाक छ । यसै सन्दर्भमा बिबिसीले एउटा अभियानबारे आलेख प्रकाशित गरेको छ, जसले शरीरको बनौट र रुपरंगलाई फरक आयममा व्याख्या गर्छ ।
मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक डा. मोर्गन फ्रान्सिस कतिपय मानसिक बिरामीहरूलाई आफ्नो शरीरको कदर गर्न सुझाव दिन्छन् । हाम्रो शरीरले हामीलाई के काममा फाइदा गर्ने गरेको छ ? त्यो विषयलाई सोचेर व्यवहार गर्न पनि उनीहरूले सुझाव दिने गरेका छन् । यसले मानसिक स्वास्थ्यमा समेत सकारात्मक फाइदा गर्ने चिकित्सक बताउँछन् । -अनलाइनखबर